Maxaa ka soo baxay kulankii Musharaxiinta Puntland iyo Isimada (dhegayso) – Radio Daljir
Diseenbar 19, 2018 11:10 b 1
Magaalada Garoowe waxaa maanta ka dhacay shir ay yeesheen Musharaxiinta utar tamaysa doorashada Puntland ee 2019 iyo Isimada dhaqanka.
Shirka ayaa waxa uu daaranaa walaaca ay ka qabaan musharaxiinta doorashada iyo faragalinta ay dowladda ku hayso xubnaha Baarlamaanka cusub iyo ciidamada amniga ee doorashada loo xilsaaray .
Afhayeenka Mushariinta Puntland Aadan ciise Gadaaale oo markii uu shirka soo dhamaaday Warbaahinta kulahadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in Isimada ay ku heshiiyeen in doorashada ay u dhacdo si xor ah oo xalaal ah .
Kulankan ayaa ku soo beegmaya xili shalay uu madaxweyne Gaas uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax madaxweyne waxaana maanta sidookale barxada Garoowe loo diday in uu ka qudbeeyo musharax madaxweyne C/samad Galan.
By xabiib 4 months
Waan arin khaldan in musharaxa loo diudo barxada garoowe ma wayday habionayn arrintaasi waayo waxay horseedi karta dhibaato
Cabdi walina kama xigo garoowe kamana laha